यी हुन् २१औं शताब्दीका विचित्रका भिकारी, अश्चर्यलाग्ने माग्ने पारा | Rajmarga
यीमध्ये एक जना कम्प्युटर वैज्ञानिक हुन् र अर्का सौर्य ऊर्जाका विशेषज्ञ । अब आफ्नो पेसा र घरबार छाडेर उनीहरु सडकमा छन्, घुमन्तु भिकारी बनेका छन् । तर उनीहरु ‘२१औं शताब्दीका भिकारी’ हुन् र उनीहरुको आफ्नै वेभसाइट पनि छ।
लिन्डन ओवेन र खोसे मानुएल कालवो जब सडकमा बसेर भिक मागिरहेका हुन्छन्, तब उनीहरु अन्य भिकारीजस्तै देखिन्छन् । तर, ध्यान दिएर हेर्दा थाहा हुन्छ कि उनीहरुसँग चार वटा डब्बा छ र त्यसमा लेखिएको छ–‘बियरका लागि’, ‘वाइनका लागि’, ‘व्हिस्कीका लागि’, र ‘विरालोका लागि’
उनीहरुको अगाडिबाट हिड्नेहरु रोकिन्छन् र हाँस्छन् । खोसे मानुएल उनीहरुसँग भन्छन्–‘हामी कम्तीमा इमान्दार त छौ, र तपाईको मूस्कानको मूल्य के एक युरो पनि छैन ?’
लाग्छ कि मानिसहरु मान्दछन् । किनभने डिब्बामा पैसा बज्छ । शालीनताका साथ धन्यवाद दिँदै खोसे उनीहरुसँग भन्छन्–हाम्रो वेभसाइट हेर्नु होला, ठेगाना यो हो–लेजी बेगर डट कम।
वेभसाइटमा स्पेनको सडक जिन्दगी र उनीहरु दुई जनाका बारेमा धेरै जानकारी छ । उनीहरुलाई पेपलको माध्यमबाट पनि भिक दिन सकिन्छ । तर बेगरको स्पेलिङ गलत किन ? जुन साथीले वेभसाइट बनायो, उ निकै पिएको अवस्थामा थियो, हाँस्दै लिन्डनले जवाफ दिए।
र, उनीहरु त्यहाँबाट हिँडे । मात्र आफ्नो वेभसाइटका कारण मात्रै यो जोडी अन्य भिकारीहरुभन्दा फरक छैन। आफ्नो खुसीले उनीहरुले सडकमा जीवन बिताउने निर्णय लिएका हुन् । लिन्डन ओवेन एक जना कम्प्युटर विशेषज्ञ थिए, वेल्समा उनको राम्रो जागिर थियो । परिवार थियो । तर जागिरको दबाव उनले सहन सकिरहेका थिएनन् । ‘एक दिन मैले आफ्नो ब्यागमा सामान हालेँ, फ्ल्याटको ढोका बन्द गरेँ र निस्किएँ’ कागजको चुरोट रोल गर्दै उनले भने । घुम्दाघुम्दै उनी फ्रान्स हुँदै स्पेन पुगे । किनभने मौसम त्यहाँ राम्रो थियो ।
ग्रानाडामा उनको भेट ५५ वर्षका खासे मानुएल कालवोसँग भयो । उनको रामकाहानी पनि केही यस्तै खाले छ । उनी टेनेरिफामा एउटा कम्पनीमा सौर्य ऊर्जाका विशेषज्ञ थिए । ८ जना कामदार उनी मातहत काम गर्दथे । खाली समय उनी कविता लेख्ने गर्दथे । तर उनी खुस थिएनन् । एक दिन श्रीमती छोराछोरी छाडेर निस्किए । स्पेनको एउटा सहरबाट अर्को सहर पैदलै घुमिरहे ।
बेगर होइन घुमक्कड
खोसे र लिन्डन आठ वर्षदेखि एक साथ छन् ।उनीहरु आफूले आफैलाई बेघर होइन, घुमक्कड भन्न रुचाउँछन् । उनीहरका अनुसार उनी आलसी पनि छैनन् । मानिसहरुको अनुहारमा मुस्कान ल्याउनुभन्दा राम्रो अरु के हुन सक्छ ? ‘बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म हामी यही गर्दछौ।’ ‘व्हिस्कीका लागि’, ‘विरालोका लागि’ केही दिनुसको दुई वटा अर्थ छ। उनीहरुसँग दुई वटा कुकुर पनि छ । व्हिस्की र बिल्ली । उनीहरुसँग अर्को डिब्बा पनि छ, जुमा लेखिएको छ–‘गाँजा पिउनका लागि’ र अर्कोमा लेखिएको छ–अन्य पापका लागि । तर उनीहरु मात्र राति बाहिर निस्कन्छन्–जब बालबालिकाहरु सुतिसक्छन् ।
फेसबुकमा उनीहरुका करिब ६०० सय जना साथी छन् । उनीहरु मान्दछन् कि सडक जीवन सहज हुँदैन । विशेषगरी जाडोयाममा । ‘तर घरमा काइदाको जीवन बिताउनेहरुको तुलनामा हामी धेरै खुसी छौ ।’ लिण्डनले भने । एजेन्सी
Previous post: काठमाडौको विमान दुर्घटना सम्झाउने अर्को ठुलो दुर्घटना, २५० जना बढी मारिए
Next post: अल्जेरियामा सैनिक विमान दुर्घटना २५७ जनाको मृत्यु (Update)
प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा इन्टरनेट कम्पनीलाई कारबाही गर्ने तयारी
स्वेच्छिक अवकाश रोजेका ४६७ कर्मचारीले किन लिए निवेदन फिर्ता ?